Ciidanka XDS oo howl-gallo ka sameeyay waddooyinka Baay iyo Bakool – Radio Muqdisho
Ciidanka XDS oo howl-gallo ka sameeyay waddooyinka Baay iyo Bakool
Ciidanka Xoogga Dalka eek u sugan gobollada Baay iyo Bakool ayaa wada dhaqdhaqyo ay kooxda Argagixisada ah ee Al-Shabaab uga sifeynayaan waddooyinka isku xira degmooyinka gobolladaasi si ganacsiga iyo gargaarkaba loo gaarsiiyo.
Taliyaha qeybta lixdamaad ee ciidanka Xoogga Dalka, Gen. Ibraahim Yaroow ayaa Radio Muqdisho u sheegay in saddexda gobolka ee Gedo, Baay iyo Bakool ay ka socdaan howl gallo uu ciidanku guul ka gaaray, kuwaas oo hadafkoodu yahay in Al-Shabaab laga sifeeyo gobolladaasi.
Ciidanku wuxuu howl gal ka sameeyay waddada isku xirta Goof-gaduud iyo Beydhabo, taas oo ay kooxda Al-Shabaab jid-gooyo dhigteen ayagoo shacabka ku dhibaateyn jiray.
Sidoo kale waddada muhiimka ah ee u dhaxeysa Buurhakaba iyo Beydhabo ayay ciidamadu howl-gal lugta ah ka fuliyeen, ayadoo raadinayay kooxo ka tirsan Al-Shabaab oo si gaadmo ah u dhibaateeya gaadiidka safarka ah ee waddada maraya.
Shirka Baarlamaanka Afrika oo ka furmay Johannesberg